‘अनुराग’ उत्कृष्ट चलचित्र : नेकपा नेता खनाल - Paschimnepal.com
‘अनुराग’ उत्कृष्ट चलचित्र : नेकपा नेता खनाल
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाका बरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ऋषि धमलाद्वारा निर्मित नेपाली कथानक चलचित्र ‘अनुराग’ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र भएको बताएका छन् ।
शनिबार कमलपोखरीस्थित् सिटी सेन्टरको ‘बिग मुभिज’ अनुराग हेरेपछि पत्रकारसँग संक्षिप्तक कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पत्रकार धमलाले बनाएको चलचित्र अनुराग सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकपटक हेर्नैपर्ने चलचित्र भएको पनि बताए । उनले भने,‘अनुराग अत्यन्तै सवल चलचित्र बनेको छ । मैले हेरेको नेपाली चलचित्रमध्ये यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट चलचित्र हो । युवा पुस्ताहरुको त यसले पुरै मन जितेको छ ।’
उनले ‘अनुराग’ सन्देशमूलक चलचित्र बनेकोपनि दाबी गरे । उनले थपे,‘अनुराग उत्कृष्ट चलचित्र बनेको छ । यसमा के छैन् ? माया छ, प्रेम छ । कलाकारहरुको अभिनयमा जीवन्त पाएँ । नायिका एलिजाजीले पनि दमदार अभिनय गर्नुभएको छ । म ऋषिजीसँग निकै खुशी छु ।’
त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पनि अनुराग अत्यन्तै राम्रो चलचित्र बनेको जनाईन् । उनले भने,‘पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तै यो चलचित्र अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट चलचित्र हो । यो चलचित्र सुपरहिट हुन्छ । सबै कलाकारहरुको अभिनय जीवन्त छ ।’
उनले फिल्मले नेपाली युवा पुस्ताको भावना बोकेको बताईन् । अनुराग हेर्नको लागि उनले सबै नेपालीहरुलाई आग्रह गरिन् । त्यस्तै चर्चित कलाकार जितु नेपालले पनि अनुराग राम्रो बनेको बताए । उनले भने,‘ऋषिजीले बनाएको अनुराग उत्कृष्ट चलचित्र बनेको छ । धमलाजीको एक्लो प्रयास प्रशंसनीय छ ।’
सांगीतिक प्रेमकथा रहेको ‘अनुराग’ शुक्रबार रिलिज भएको हो । पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको फिल्ममा उनकी श्रीमति एलिजा गौतम र नायक समुन्द्र पण्डितको शीर्ष भूमिका छ । एलिजा र समुन्द्रले यही फिल्मबाट अभिनयमा ‘डेब्यु’ गरेका हुन्।
प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज १५, २०७५ 3:55:10 PM
Prevकिन हटाइयो मालपोत कार्यालयका लेखपाढी व्यवसायलाई ?
Next‘अबकाे निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो पाटी बनाऔं’